RuiYi dia mpamatsy matihanina sy mpanamboatra takelaka firaka aluminium any Shina ary miara-miasa amin'ny orinasa malaza amin'ny aluminium miezaka ny hiaro ny mpanjifa amin'ny sehatra samihafa izahay.Ny orinasanay dia naorina tamin'ny 1997, ankehitriny ny orinasa dia manana mpiasa maherin'ny 4000, anisan'izany ny mpiasa ara-teknika matihanina maherin'ny 300.
Mpanamboatra, Agent, mpanondrana, orinasa mpivarotra, mpivarotra
Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eoropa Andrefana, Eoropa Atsinanana, Azia Atsinanana, Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika, Oseania, Maneran-tany
Mba ho vahaolana tokana tokana amin'ny famatsiana metaly aluminium any Shina.
Manolo-tena izahay hanome vokatra Aluminum kilasy manerantany.Tsy misy zava-dehibe kokoa aminay noho ny fahafaham-ponao tanteraka amin'ny serivisy sy ny vokatray miaraka amin'ny kalitao miavaka, ny fitomboana mitohy, ny fahafahana ary ny fifandraisana mahasoa.
Xiaoxian RuiYi Commercial Trade Co., Limited dia nifantoka tamin'ny fitaovana firaka aluminium avo lenta nandritra ny 10 taona tany Shina.Nanomboka tamin'ny asa kely izahay, saingy lasa iray amin'ireo mpamatsy lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny aluminium any Shina.
Safidio ny tombony fototra lehibe ananantsika
Fitaovana lehibe hiantohana ny kalitao
Avy amin'ny baiko napetraka ka hatramin'ny fandefasana entana any ivelany, ny fanaraha-maso kalitao telo no atao mba hahazoana antoka fa mihoatra ny 100% ny tahan'ny vokatra vita.Manana tahiry be dia be izahay, ary afaka manome ny mpanjifa amin'ny famatsiana ampy mba tsy hanahy ny mpanjifa amin'ny krizy amin'ny tsy fahampian'ny tahiry sy ny tsy fahampian'ny tahiry.
Fanaterana ara-potoana sy fitsitsiana ny vidiny
Mampanantena izahay fa aorian'ny fametrahana ny mpanjifa dia halefa amin'io andro io ihany ny vokatra.Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. manome amim-pahatsorana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa an-trano sy vahiny, ary manome vokatra mahafa-po ny mpanjifa.
traikefa momba ny serivisy
Mampanantena izahay fa ny orinasanay dia hanaraka ara-potoana ny baiko rehetra mba hahazoana antoka fa ny mpanjifa dia afaka mandray soa aman-tsara ny entana, mihaino ny heviny sy ny soso-kevitr'izy ireo tsy tapaka, ary misaintsaina ny olanay manokana.Avelao ny mpanjifa hahatsapa ho maivamaivana.
Ny mombamomba ny QC
Aluminum Alloys dia mitazona kalitao avo lenta mandritra ny dingana famokarana manontolo.Manomboka amin'ny fanaterana ingot sy fasika ka hatramin'ny fisavana refy farany, dia omena saina be ny vokatra rehetra araka ny voalazan'ny takelaka fanaraha-maso ny dingana ho an'ny fitakiana fanariana tsirairay.
Ny fitaovana kalitao dia misy ny spectrometry faobe ho an'ny famakafakana metaly, SPC amin'ny fanaraha-maso fasika, fitsapana ara-batana, loko miditra, x-ray, fitsapana tsindry ary fisavana ny refy elektronika.Ny rafitra fitahirizana firaketana midadasika dia manangona ny angon-drakitra mba hahazoana traceability tanteraka.Ny fandaharan'asa fanaraha-maso famokarana vita amin'ny informatika maoderina dia manome fanavaozana isan'andro momba ny famokarana mamela ny fanaterana ara-potoana.
Aluminum Alloys dia manohy ny fanoloran-tenany amin'ny kalitao amin'ny alàlan'ny fandaharan'asa mitohy amin'ny fampivoarana ny trano sy ny fizotrany mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny ho avy, indrindra amin'ny fampiharana sarotra.